Kwụsị ikwusa Social Networks na Ulo oru | Martech Zone
Tuesday, February 3, 2009 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Onwere ndi mmadu ole na ole m na-akwanyere ugwu na mba na Social Media anya - mana ekwenyere m n’ezie na ha na-achughari ufodu ulo oru na uzo na ezighi ezi site n’inye ha ndụmọdụ ka ha tinye ego ha na netwok.
Dị ka ị maara, m na-arụsi ọrụ ike n'ofe tọn nke netwọk mmekọrịta, ebe nrụọrụ weebụ na-elekọta mmadụ na ngwa mmekọrịta. Enwere m ezigbo ezigbo usoro na netwọkụ m nọ. Ajuju a bu etu blog m siri mee nke oma ekele na netwọk mmekọrịta ndị ahụ. E kwuwerị, ndị a bụ ezigbo ndị enyi m tụkwasịrị obi - netwọk m! Ha kwesịrị ịkọ maka ọnụ ọgụgụ buru ibu nke okporo ụzọ, nri?
Ka anyị lelee ndị ikpeazụ 143,579 kwuru ndị ọbịa na blọgụ m:
Google: Ndi njem puru iche nke 117,607
StumbleUpon: 16,840 ndị ọbịa pụrụ iche
Yahoo!: 4,236 ndị ọbịa pụrụ iche
Twitter: 2,229 ndị ọbịa pụrụ iche
Ndụ: ndị ọbịa 605 pụrụ iche
MSN: ndị ọbịa pụrụ iche nke 559
Jụọ: 476 ndị ọbịa pụrụ iche
AOL: 446 ndị ọbịa pụrụ iche
Facebook: ndị ọbịa 275 pụrụ iche
LinkedIn: Ndi nleta 93 di iche
Baidu: ndị ọbịa pụrụ iche nke 79
Altavista: 54 ndị ọbịa pụrụ iche
Plaxo: 41 ndị ọbịa pụrụ iche
Netscape: 39 ndị ọbịa pụrụ iche
Ọ bụrụ na m na-ege ntị niile Nchịkọta, M ga-eji ụbọchị niile na-emelite Facebook na LinkedIn igbal i mee mkpari. Achọghị m.
M na-emezi akpaaka na mmelite na netwọkụ mmekọrịta ndị ahụ, mana anaghị m eji oge arụ ọrụ. Enwere ụfọdụ ihe kpatara ya:
Ha bụ -ama netwọk m tụkwasịrị obi. Achọghị m inupụ ma ọ bụ resị ha - ha adịlarị maka m.
ha ebumnuche ijikọ m site na ndị a na-ajụ ọhaneze agaghị azụta n’aka m, ha anaghị atụ anya ka m resị ha ha. Yabụ, Agaghị m eme mmekọrịta mụ na ndị a metụtara.
Aga m aga n'ihu na-agbalị ịme mmekọrịta ọhụrụ ebe ọ bara uru - site na igwe ihe eji acho ihe. Amaara m na enwere ndị na-achọ azịza m nyere na blọọgụ a ka m wee lekwasị anya na itolite ndị na-eso m site na ịza ajụjụ ndị ahụ. Ọ bụ ikike dabere, ọ bụ nnukwu (ma e jiri ya tụnyere okporo ụzọ 0.2% na netwọk m), na ha nzube bụ ịchọ azịza m na-enye.
Nke a ọ pụtara na ị na-eme ihe m na-eme?
MBA! Anaghị m adụ gị ọdụ ka ị leghara netwọkụ mmekọrịta anya ma ọ bụ ndị folks na-agbanye gị ka ị jiri ha. Ihe m na-adụ ọdụ bụ ka ị tụọ nsonaazụ nke mbọ gị wee gbanwee usoro gị. Ọtụtụ Smippies nọ ebe ahụ na-ezisa uru nke Social Networks na-enweghị nka iji nyere gị aka ịlele nsonaazụ ahụ ma dozie usoro gị.
Kpoo ndị ndụmọdụ a aka ka ha gosipụta uru ego! Agwara m ụfọdụ ndị ọkachamara na-abaghị uru na Ọchịchị ndu taa eziokwu - dị ka azụmahịa, ana m eji akara aka site na akara dollar. Ọ bụrụ na m na-azụ ahịa nke ọma, M na-amụba ahịa m na-enweta maka dollar, na-eto eto dollar m, na-ejigide dollar m.
Tags: azụmahịa mmadụụlọ ọrụ na-elekọta mmadụ mediaelekọta mmadụ mediaSocial Media Marketingmgbasa ozi mgbasa ozi maka azụmahịana-elekọta mmadụ media referrals
Ihe m mụtara na CloudCamp
Feb 4, 2009 n’elekere 6:54 nke abali
Echere m na ị nwere ebe dị oke ebe ahụ, nyere oke oke osimiri dị n'etiti engines ọchụchọ na ndị ọzọ. Agbanyeghị ọ nwere ike ịmasị ma ọ bụrụ na mmadụ nwere ike ịchọpụta oke ntụgharị akụkụ nke ọ bụla, naanị iji lelee naanị ndị ọbịa na-anaghị emegharị emegharị nke ọ bụla.
Feb 4, 2009 na 12:49 PM
Kpamkpam! N'ihi ya, iji tụọ nlezianya - ma tụọ ya na $. Daalụ goacom!
Feb 4, 2009 na 6:41 PM
AMEN !! Ekwenyere m kpamkpam. Ọ bụ ezie na ịnaraghị ihe ọ bụla na mgbasa ozi mmekọrịta, ị ga-amata ebe okporo ụzọ gị si abịa site n'okike! Ọbụlagodi na ị na-enweta okporo ụzọ site na ụfọdụ saịtị mgbasa ozi mgbasa ozi (ntụgharị Stumbleupon), ị ghaghị tụọ uru na ebumnuche nke ndị ọbịa ahụ.
Ọ bụ ezie na… M ga-etinye blọọgụ na otu udi…
Feb 4, 2009 na 11:28 PM
Ekwenyere m na gị 100%! A gụnyere blogging na MUST nwere nloghachi na ntinye ego ma ọ bụrụ na a ga-eji ya dịka ụzọ dị mma iji wepụta mgbanwe. Ọtụtụ Smippies nọ ebe ahụ na-ere blọgụ dị ka Grail Dị Nsọ, mana ha anaghị akụzi ụlọ ọrụ ka esi etinye blọọgụ n'ụzọ aghụghọ ma tụọ nsonaazụ ya.
Ọchịchọ dị oke mma n’ihi na edere ebumnuche na obere “igbe nchọ” ahụ - ma ọ bụ PPC ma ọ bụ ihe okike!
Feb 6, 2009 na 1:05 PM
Ọbụna n'ime saịtị mmekọrịta ị nwere ike ime nke a. Anyị na-eziga ozi na ozi na ọtụtụ saịtị na twitter na-ewetara anyị okporo ụzọ kacha mma kacha mma. Ọ bụ nke abụọ n'ozuzu ya, mana oge ejirila na peeji ndị elere anya kacha mma.
Yabụ n'ime obere ego ahụ, anyị na-elekwasị anya n'ịhụ na twitter bụ akụkụ nke mgbasa ozi anyị.
Feb 6, 2009 na 9:04 PM
Ọ chọrọ ịmata, Twitter na-eweta saịtị gị karịa okporo ụzọ Search? Ọ bụrụ otú ahụ, ọ ga-abụ ihe ijuanya! Ma ọ bụ ọ nwere ike ịpụta na oge eruola ka ị nweta enyemaka SEO ma ọ bụ bido blog azụmaahịa!
Feb 6, 2009 na 3:43 PM
Anọ m na PR ma anyị na-eme ọtụtụ SM ndụmọdụ / ikwusa ozi ọma ụbọchị ndị a. Mana ana m akpachapụ anya ichetara ndị ahịa na atụmatụ ọhụrụ ndị a ga-abụ akụkụ nke azịza zuru oke. Ọtụtụ ndị ahịa anyị chọrọ enyemaka na-esepụta ala dijitalụ na ịtụgharị ọdịnaya dị mma na netwọkụ mmekọrịta. Mana n'ikpeazụ ọ ga-alaghachikwute dollar ma gosipụta uru. Ma ị gosipụta okwu dị oke mkpa na Google bụ "homepage" gị ma ị ga-elebara isi iyi ahụ anya nke ọma. Daalụ. (ps m jikọtara-na site na Twitter, heh)
Feb 6, 2009 na 9:08 PM
Nke ahụ dị egwu! Obi dị m ụtọ ịhụ gị ebe a site na Twitter - Ana m erute 8% nke okporo ụzọ m na ụbọchị site na Twitter ka m wee jiri ya kpọrọ ihe. Naanị m ga - enweta 50% + site na Search ka m wee tụtụkwuo anya n’ebe ahụ! 🙂 M na-akpaghị aka na ndepụta m na Twitter Ikwusa ozi nke mere na ọ dịghị achọ mgbalị ọ bụla etinye na ya!
Feb 16, 2009 n’elekere 10:31 nke abali
Akwa post Doug. Hit kụrụ na (n'echiche anyị) ebe kachasị emetụ ahịa - MGBE. Ọtụtụ ndị mmadụ na azụmaahịa dara na ya ma ghara ịme mkpebi gụrụ akwụkwọ ma ọ bụ mgbanwe maka atụmatụ / mmemme ahịa ha. Ekwela ka m mehie, mgbasa ozi ọha na eze bụ ngwaọrụ nkwukọrịta dị ukwuu, mana ị ga-enwerịrị ike ịtụle mbọ ị na-etinye na ya na ndị ọzọ.